Etu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere ike isi nye aka jigide onyinye na obodo ime obodo
Etu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere ike isi nyere aka jigide onyinye na obodo ime obodo
Kpọọ maka Amụma: Microsoft AI maka nnweta nnweta 2021
Ngwa maka Senegal Youth Consortium Hackathon ga-emechi n'oge na-adịghị anya
Mmalite nnweta ihe ọchụnta nri ndị Egypt Appetito na-eweta $ 450k iji kwalite Mgbasawanye Africa
19 awa gara aga
“Site na iwu, ulo oru nwere ike iwulite Tech Ecosystem iji meziwanye Digital Digital Economy nke Nigeria” - Dr. Itoro Emembolu, MD, TechQuest STEM Academy
Usoro okike nke Tech nke Africa choro otutu umu nwanyi ka ha mejuputa ochichi ndi ndu ma weta echiche ndi ohuru na ndu- Nkiru Amadi-Emina, onye isi oru nke Eastern Eastern, Kobo360
21 awa gara aga
2021 National Life Science Asọmpi ga-emepe maka ụmụ akwụkwọ Naijiria
Andela na-ekwuwapụta Mgbasawanye Global nke Nkà Mmụta Injinia ya
Usoro nke teknụzụ: etu Smart Solutions M መፍትሄ ga - esi bawanye ọrụ ike na Nigeria - Afolabi Sobande
Withlụso Nrụrụ Aka Na Teknụzụ [ICT Clinic]
Top 4 Android OS Nsogbu na otu esi akwụsị ha
LG Signs Rita Dominic dị ka Brand Ambassador nke ya Ngwaahịa Ngwaahịa
Ruo ọtụtụ iri afọ, ụlọ ọrụ, ọkachasị ndị na-eweta teknụzụ, agbasoro usoro arụmọrụ ụfọdụ. Ha na-amalite n’otu obodo, bulie ego n’aka ndị na-etinye ego, na-adọta talent sitere n’obodo na obodo ndị dị nso, wee mezie ihe nlereanya ahụ n’obodo ọzọ dị mkpa ka ha na-agbasawanye.
Agbanyeghị, ihe ndị mere n'ọnwa iri na abụọ gara aga egosila anyị na ụdị ndị ọrụ a nwere ike bụrụ ihe adabaghị adaba ma na-emebi ụwa n'ozuzu ya, na ọ na-ebute mbibi talent n'ime ime obodo.
Ọpụpụ nke ndị ntorobịa, nke ụkọ nhọrọ na ohere na-agba ume na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ, na-eme ka obodo ndị a ghara ịdabere na enweghị enyemaka n'ikpeazụ.
Andrew Bourne, onye njikwa mpaghara, Africa, ụlọ ọrụ Zoho, kwupụtara echiche ya.
Otu n'ime ihe mgbochi iji lebara ọdịda ime obodo anya bụ maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ ịghọta na talent nwere ike ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla ma nye ndị ọrụ nhọrọ nke ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla.
Site na ikwe ka ndị ọrụ ọkaibe nwere nkà na-arụ ọrụ site na ime obodo ha, anyị nwere ike inyere obodo ndị na-agbasi mgba ike ka ha nwee ụyọkọ akụ na ụba onwe ha ma belata ọtụtụ ahaghị nhata nke kpatara ọgba aghara ọha na eze n'ime afọ ole na ole gara aga.
“Na Zoho, anyị na-ezo aka na usoro a dịka 'transnational localism,' nke bụ ihe niile gbasara uto nzukọ a na-agbanye mkpọrọgwụ na-arụkọ ọrụ na ijere ndị obodo gburugburu ụwa aka, na-ejikọ ụwa niile site na ịkekọrịta ihe ọmụma, ikike, na ọdịbendị.
N'ikwekọ na nke a ọhụụ, mgbe ọ na-abịa na-ewu mmadụ isi obodo na a obodo-larịị mmetụta, anyị kwenyere na ọ dị mkpa maka tech ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nri ebe ihe ka ọtụtụ n'ime ndị talent bụ - ime obodo na obodo nta. "
Nsogbu a nwere na akụ na ụba n'ime obodo mepere emepe
Taa, ihe ka ọtụtụ n'ime ihe onwunwe na ohere dị iche iche na-etinye uche n'obodo mepere emepe gburugburu ụwa.
Ọ bụ ya mere ndị nkịtị gụsịrị akwụkwọ na teknụzụ na ndị na-ahụ maka azụmaahịa ji aga San Francisco, Tel-Aviv, Cape Town, Nairobi na isi obodo ndị ọzọ iji nweta ọrụ na-akwụ ụgwọ dị elu ma ọ bụ wuo mmalite ha.
Obodo ndị a bụ ụlọ nke mahadum ndị kachasị elu (na-enye nkà na ụzụ kachasị mma), nnukwu ego nke isi obodo (mkpa maka itinye ego), obodo ndị nwere ọchụnta ego (nwere netwọkụ nkwado dị ezigbo mkpa), na ụlọ ọrụ ntanetị na-ejupụta. Otu ihe a metụtara ndị ọrụ ndị ọzọ n'obodo ndị ọzọ (ego na London, New York, na Johannesburg, dịka ọmụmaatụ).
Iweghachite mmetụta na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ime obodo, site na enyemaka nke igwe ojii
N'afọ gara aga ma ọ bụ karịa, agbanyeghị, nnabata dipital dijitalụ (n'ihi ọrịa a na-efe efe) egosila anyị na remoteness anaghị akwụsịlata ikpughe ọzọ.
Ọbụna dịka COVID-19 mechiri ma ọ bụ mebie agbụ ndị ọzọ, ndị azụmaahịa nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ n'ihi na njikọ ọrịa na mmekorita emetụtaghị ọrịa ahụ.
Ekele maka teknụzụ dijitalụ dị ka igwe ojii, brọdbandị zuru oke na ọrụ ịkparịta ụka ntanetị, ọtụtụ ndị ọrụ kwagara n'obodo ha (ma ọ bụ ịnọ ezinụlọ nso ma ọ bụ ibi ndụ dị jụụ n'ihi oge a na-ejighị n'aka) nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị ọ bụla.
Nke a bụkwa oge mgbe Zoho kpebiri imepe obere ọfịs satịlaịtị iji nye ndị ọrụ anyị, ndị laghachịrị n'obodo ha, na ebe ọrụ gọọmentị dị nso.
Officeslọ ọrụ ime obodo, nke anyị guzobere mbụ na India, natara ezigbo nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ anyị na anyị mere ka atụmatụ anyị mepee ma mepee ọtụtụ ụlọ ọrụ na afọ gara aga.
“Ka ọ dị ugbu a, enwere karịa ụlọ ọrụ Zoho 30 n’ime ime obodo na obodo ndị na-abụghị obodo mepere emepe gburugburu ụwa (ọtụtụ n’ime ha nọ na India; mpaghara ndị ọzọ gụnyere US na Mexico).
Anyị ga-anọgide na-ewu ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a gafee ụwa, iji mee ka ndị ọrụ dị njikere ịkwaga n'obodo ha na obodo ha. "
Mgbe ndị ọkachamara nwere nkà laghachi n’obodo ha, ọ na-ebute echiche dị iche iche. Netwọk ịkesa ihe ọmụma miri emi na-eji nwayọ apụta ma na-enyefe nkà na-adị mfe, na-eduga n'ịganye mgbe nile nke ndị ntorobịa ime obodo.
Nke a, tinyere ohere ọrụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-emepe emepe, nwere ike inye aka maka ọdịnihu ka mma maka obere obodo ma kwalitekwa ịba ụba akụ na ụba.
Inabata ụzọ ka mma
Taa, anyị doro anya n'oge gara aga mgbe naanị ụzọ maka ụlọ ọrụ ntanetị ga-ejigide ọdịnala ụlọ ọrụ ha ma wuo usoro asọmpi zuru ụwa ọnụ bụ site na ụlọ elu ụlọ ọrụ monolithic na-ehi ụra na-ehi ụra na tebụl ping pong.
Enwere nhọrọ ka mma, nke ga-adigide ugbu a, na-arụ ọrụ site na ijikọ dijitalụ - atụmatụ a na-ekesa nke a na-ekesa site na ụdị 'hub-and-said', nke nwere ọfịs na obodo abụọ / obere obodo na obere 'hubs' na obodo ndị agbata obi na-enyere aka na mmepe obodo na imepụta akụ na ụba.
Ihe ngosi a gosipụtara: Andrew Bourne, Onye njikwa mpaghara, Africa, Zoho Corporation
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Idenye aha na techbuild.africa kwa izu mgbari maka mmelite.
Ndị mmekọ Flutterwave Forter iji gbochie Igha Ndị Ahịa n'Africa
Wepụ si Cashless Africa Virtual Omume